Tsy fahalalana, COVID-19 ary fizahan-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao isan-karazany » Tsy fahalalana, COVID-19 ary fizahan-tany
Vaovao • fanorenana • Tourism • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
fizahan-tany sy covid-19
Mora ny milaza fa nidina an-dohalika ny indostrian'ny fizahan-tany noho ny Covid-19; na izany aza, diso ny toerana misy azy. Ny sary malalaka kokoa ahitàna fihaonan'ny kolontsaina, ny politika, ny siansa ary ny jeografia natambatry ny fitarihana tsy fahaizana miteraka famongorana asa an-tapitrisany, fidiram-bola amina miliara, ary ho avy izay sady tsy fantatra no tsy fantatra.
Ny epidemika dia tsy fiasan'ny pathogens fotsiny, fa taratry ny firafitry ny fiarahamonina; ny fomba fampiasana / fanararaotana fahefana ara-politika amin'ny anaran'ny fahasalamam-bahoaka; ahoana ny fanangonana tahirin-kevitra momba ny habetsahana; ny fomba famaritana sy fanasokajiana ary maodely ny aretina; miaraka amin'ny fomba anoratana ny tantara, sokajina ary zaraina.
Rehefa hita ny COVID-19 tamin'ny taona 2019, dia nihemotra ny mpahay tantara sy ny mpahay siansa alohan'ny niatrehany ny ankehitriny sy ny nisaintsainany ny ho avy. Ny vondrom-piarahamonina siantifika / fahasalamana dia nijery ny tantaran'ny pandemika, nitady lamina sy lesona nianarana; indrisy fa tsy nisy bala majika hampiato avy hatrany ny viriosy. Tsy nisy manam-pahaizana nahafehy an'io aretina io na dia efa niparitaka nanerana ny planeta nandritra ny taonjato maro aza ny aretina toy izany. Efa nipetraka anefa, ny fomba fanandramana / tena fanaraha-maso ny aretina, anisan'izany ny fanaraha-maso, ny quarantine, ny sarontava ary ny fanasana tanana, mampatsiahy ny olom-pirenena rehetra amin'ny tantara (ie, SIDA; 1918-20, Influenza; taonjato faha-14, Fahafatesana Mainty) izay efa teo izahay ary nanao an'izany. Ny tsy fahombiazan'ny rehetra tamin'ny famolavolana ny viriosy dia ny tsy fisian'ny fitarihana tsy miankina sy ny besinimaro namela ny famahana olana teo amin'ny latabatry ny mpitantana manerantany izay nisafidy ny hametraka tombony alohan'ny fiarovana, miafina ao anaty aloka ary mieritreritra fisainana majika ary mamporisika ny olona rehetra hino fa tsy ho hita ilay virus. irery tsy misy idiran'ny olombelona.
Ny governemanta sinoa dia nisalasala tsy nihaino ny mpahay siansa ary nandevina ny fanairana fa niely ny viriosy, nifidy ny hamono ireo iraka noho ny hafatra. Ny mpitantana amina sambo fitsangantsanganana lehibe dia nisafidy ny tsy hiraharaha ireo fampitandremana avy amin'ny firenena sinoa sy japoney fa niditra an-tsokosoko teny amin'ny habakabany ilay virus ary ny mpandeha sy ny ekipa dia mpitatitra aretina sy mpanaparitaka virus. Ny mpiasan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana (OMS) dia aleony miaro ny fanafenana ara-politika azy ireo fa tsy mihevi-tena ho maika noho ny vonjy taitra ara-pahasalamana, mampitandrina an'izao tontolo izao fa mahafaty ity virus ity ary miparitaka haingana.
Tsy mijanona irery ny aretina
Ny epidemika dia misy fiantraikany sy fiatraikany amin'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina, mamakivaky ny fetra anatiny sy iraisam-pirenena, miainga amin'ny tsy fahalalana ka hatramin'ny fanambarana, avy amin'ny tsirairay ka hatramin'ny hetsika iraisana, amin'ny fiezahana hifehezana ny tsy fetezan'ny aretina. Amin'ny farany dia mijanona eo amin'ny vala amin'ny tantara ny aretina, ary ny lesona nanjavona dia nanjavona tao anaty fotona manjavozavo izay manangona vovoka amin'ny talantalan'ny mpitsabo matihanina sy ireo mpitondra governemanta. Mampalahelo fa alohan'ny fahitana ny farany dia olona an-tapitrisany maro no marary mafy ary an'arivony maro no maty tsy amin'antony.
Politika na Orinasa
Raha ny fiandohan'ny siantifika an'ny COVID-19 dia ao amin'ireo vondrom-piarahamonin'ireo mpitsabo manerantany, ny fifindrany dia mifamatotra akaiky amin'ny fitondran-tenan'olombelona, ​​ny fisorohana ny indostria ary ny fandavana ny governemanta. Ny fitondran-tena mahazatra amin'ny tànana, ny fanorohana amin'ny takolaka sy ny molotra, ny fandalovan'ireo mpandeha mandalo faritry ny seranana amin'ny seranam-piaramanidina eran-tany, ny gara sy ny tobin'ny sambo fitsangantsanganana, ny governemanta izay miahy kokoa ny politika fa tsy ny ain'ny olombelona, ​​dia samy nandray anjara tamin'ny fanafainganana ny fiparitahan'ny viriosy.
Na dia 11 volana amin'ny areti-mandringana aza dia miandry fatratra ny vaovao momba tranga fanampiny izao tontolo izao, ary mitazona ny fofonain'ny vinavina ho faty vaovao sahala amin'ny fiandrasana ny faminaniana momba ny toetr'andro sy ny tsenan-tahiry. Mampalahelo fa ity fampahalalana ity dia, farany tsara indrindra, tsy azo atokisana, satria ny angon-drakitra dia nampifandraisina tamin'ny filan'ny mpitondra tsy misy fotony sy ny toetran'ny olombelona tsy ampoizina. Na dia androany aza, miaraka amin'ny fanambaràna ny fisian'ny vaksiny dia toa ezaka lehibe ho an'ny fifandraisam-bahoaka io hetsika io fa tsy fomba fiasa mirindra mba hanoherana ny onjan'ny fandringanana sy famoizam-po COVID-19.
Ny epidemika dia faritana amin'ny tsy fahatokisany. Amin'ny taonjato faha-21, andrasana ny hahafantaran'ny mpahay siansa, ny mpanao politika, ny mpitondra fanjakana sy ny sehatra tsy miankina ny valiny rehetra; na izany aza, tsy afaka ny ho manam-pahalalana tanteraka ny olona manoloana ny aretina vaovao tsy voafehin'ny fetra nasionaly na ny fikarohana siantifika teo aloha. Tao amin'ny The Lancet (1953), ny gazety ara-pitsaboana any Angletera, nandritra ny valan'aretina kolera fahatelo tao amin'ny firenena, dia afaka nilaza ireo mpahay siansa hoe: “Tsy mahalala na inona na inona isika, any an-dranomasina isika, ao anaty vinavinam-panadihadiana.”
Azo natao sy ekena tamin'ny taonjato faha-19 ny niaiky fa "tsy nahalala;" na izany aza, tamin'ny taonjato faha-21, fa tsy hiaiky ny tsy fahalalàna sy ny fanaovana lesoka vokatry ny tsy fahampian'ny fahalalana, fampahalalana sy traikefa, ny mpitondra misento ao anaty aloka, mandà ny hamaly ny fanontanian'ireo mpanao gazety, ary mandà izay fahalalana na liana amin'ny fitadiavana ny antony sy ny vahaolana (izany hoe Barbados sy ny fikasana malemy hamerenana ny fitsangantsanganana an-tsambo). Na dia tamin'ny Desambra 2020 aza, efa ho herintaona lasa izay nanomboka nanjakan'ny COVID-19 ny fiainantsika, ny antony, ny vokany, ny vahaolana ary ny safidy fisorohana dia mijanona eo amin'ny sehatry ny "tsy fantatra" ary maro ny hetsika ampiharina tafiditra ao amin'ny kilasin'ny hadalana na tsotra adala.
Raha ny tantara no jerena, ny fitantanana areti-mifindra dia nijanona teo am-pelatanan'ny manampahefana politika nifampiraharaha, namolavola, nampiasa ary nanambara ny làlan'ny fahasalamana tsara. Ny mpitarika governemanta sy ny politika dia nitarika tamin'ny alàlan'ny fandaminana sy fizarana fanafody maimaimpoana, fanangonana sy fanaparitahana vaovao ary ho an'ireo izay manaraka lalam-pinoana, mandrisika ny fanompoana sahaza azy. Ny fomba fiasa sinoa amin'ny fihanaky ny wuhan dia nahazo modely mitantana, ambany-ambany, nampiasa ny paikady napetraka nandritra ny fihaonana tamin'ny aretin-koditra, habokana ary areti-mandringana.
Modely iray hafa no misy, fomba fiasa izay heverina ho fanjakana "mpanao asa soa". Ny tarana-mpanjaka (960-1279 CE), dia nandray ny hevitra momba ny fangorahana; ny fanjakana miahy no afaka manome ny olom-pireneny, manome sosokevitra mampandroso ny fahasalamana, manangana paroasy marary ary dispensera ho an'ny daholobe. Ny voalohany dia ny fomba fiasa nampiasain'ny Trano Fotsy notarihin'i Trump, ny olom-boafidy repoblikana ary ny mpitantana ny sehatra tsy miankina, raha toa kosa ny ekipa Biden vaovao niditra tamin'ny fomba fampiasa Benevolent State.
Post Era ny fahamarinana. Ny famokarana ny tsy fahalalana
Fanamby natrehin'ny fitondran'ny Biden rehefa manandrana miresaka am-pahamendrehana sy pragmatika ny areti-mandringana manerantany sy ny loza ara-toekarena, dia ny banga be eo amin'ny tahiry izay tokony ho feno fikarohana marina sy marina - mandritry ny vanim-potoana nanomboka tamin'ny filoha George W Fitantanan'i Bush. Mampalahelo fa i Etazonia dia niaina nandritra ny fotoana iray izay nanakanana ny fikarohana siantifika raha nanimba ny toerana misy ny foto-kevitra politika ankehitriny. Tamin'ny taona 1980, ny filoha Ronald Reagan dia nandà tsy hampiasa ny teny hoe SIDA ary ny firenena dia mbola mijaly noho ny maso ny filoha Richard Nixon's Agency Enforcement Agency (1971) izay nahitana rongony toy ny marijuana, LSD ary psilocybin ho toy ny Fandaharana 1, izay mandrara ny fikarohana ara-pahasalamana. amin'ny fampiasana medikaly an'ireo fanafody ireo.
Ny tsy fahatokisana ny fahamarinana sy ny filàna fikarohana dia mitohy hatramin'ny 2021. Ireo mpitsikera amin'ny fahitalavitra dia manohy miady hevitra momba ny fisian'ny fiovan'ny toetrandro, na dia teo aza ny fihenan'ny glaciers taloha, ary ny mason'ny tany manontolo nanjavona nandritra ny rivo-doza sy ny tsunami. Ora maro no iadiana hevitra raha tokony ho babo anaty tranomaizina mandritra ny volana maro ny ankizy, tafasaraka amin'ny ray aman-dreniny, ary manontany tena raha tokony hatao hoe "tobin'ny fifantohana."
Trump sy ny mpitarika orinasa dia nirotsaka an-tsehatra tamin'ny fampiroboroboana ny "agnotology" ny fandalinana ny famoahana fanahy iniana ny tsy fahalalana. Ireo andrim-panjakana politika sy orinasa lehibe (izany hoe paraky, fanafody, solika, fambolena, banky, sambo fitsangantsanganana, seranam-piaramanidina, fizahan-tany) dia manakana ny fahalalana hifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo ara-toekarena na foto-pisainana. Ny adihevitra siantifika dia ampiasain'ny sehatra miankina sy tsy miankina, tsy toy ny vokatra tsy azo ihodivirana noho ny tsy fahalalana fa toy ny zavatra namboarina sy notehirizan'ny fahalianana matanjaka hiteraka fisalasalana.
Fandraisana andraikitra momba ny fizahan-tany fizahan-tany
Ny areti-mandringana COVID-19 dia mifamatotra amin'ny politika, mifamatotra amin'ireo mpijery eo an-toerana, nasionaly ary iraisam-pirenena ao an-tsaina, manamboatra ny aretin'ny aretina sy ny valiny. Ilay lehilahy fotsy hoditra dia nibahan-toerana tamin'ny rafitra politika sy orinasa maro izay nanarona sy tsy niraharaha ary nanilika ny vehivavy sy ny olona miloko. Ny fahatongavana sy ny fikolokoloana ny areti-mandringana dia nahafahan'ny mpitarika nanala vehivavy maro be teny an-tsena, nanery azy ireo hody any an-trano mba hitaky ny fitakian'ny fianakaviana. Ny vehivavy sy ny olona manana loko dia mitazona ny ankamaroan'ny asa eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany, ary ny fahafatesany dia nahatonga ireo olona ireo tsy an'asa, tsy nahazo tombony ary tsy nanana fanantenana firy amin'ny ho avy mamiratra.
Niaina tamin'ny vanim-potoana natosiky ny fiakaran'ny populism izay mampiroborobo ny tsy fahatokisan-tena amin'ny fahaizana manokana isika, mamporisika ny olona hiantehitra amin'ny zavatra niainany fa tsy hijery sy hatoky ireo matihanina sy manam-pahaizana amin'ny sehatra misy azy ireo. Amin'ny tranga sasany, ny tsy fahatokisan'ny manam-pahaizana dia fihetsika mitombina amin'ny zava-misy fa misy fiatraikany lehibe amin'ny famolavolana, famokarana ary fizarana izay navoaka ho ether ho toy ny “fahalalana siantifika” ny orinasa raha toa ka tena zara raha misy toy ny vokatra mamoaka fanafody simika mahafaty ao amin'ny tontolo iainana, ny rojo sakafo ary ny rafitra fitsaboana.
Nanamarika ny tompon'andraikitra iray amin'ny indostrian'ny paraky fa "Ny fisalasalana no vokatray." Nandritra ny efa ho 70 taona lasa izay no nanamarihana fa ny vokadratsin'ny sigara dia nanentana ny indostrian'ny sigara hanome hevitra fa misy toerana tsy tokony hiadian-kevitra momba io olana io. Avy amin'ny fanambarana an-gazety, famatsiam-bola fikarohana momba ny famitahana, fananganana fikambanana siantifika mialoha, fanodikodinana ny fandaharam-potoana amin'ny lalàna, ny fiandohan'ny "fikarohana am-pirahalahiana" hamoahana amin'ny haino aman-jery malaza, ary ny fanaparitahana vaovao diso ataon'ny mpanjifa, ny duplicity dia manohana hatrany ny varotra isan-taona manerantany amin'ny sigara 5 tapitrisa tapitrisa mahery, nifonan'ny olona izay resy lahatra fa ny "angamba" fifohana sigara dia tsy manimba.
Nanomboka tamin'ny tapaky ny taompolo 1950 - 1990, ny Council for Tobacco Research, notohanan'ny mpanamboatra sigara lehibe, dia nandany $ 450 tapitrisa tamin'ny fikarohana natao mba hanodinana ny sain'ny besinimaro amin'ny fikarohana ara-dalàna momba ireo antony hafa manimba sy manampy toy ny loza mety hitranga amin'ny asa. Raha tokony hanoherana ny fifandraisana matanjaka sy voaorina tsara eo amin'ny fifohana sigara sy ny homamiadana, ny tanjon'ny indostria dia ny hanakorontana ny fitakiana amin'ny filazany hoe, "mila fikarohana bebe kokoa isika." Amin'ny tranga maro, ny hetahetan'ny mpanao politika, mpahay toekarena, mpanao gazety ary mpitantana orinasa dia ny hamboly fisalasalana sy tsy fahalalana eo amin'ny vahoaka; tetika politika io ary ny fifandraisana misy eo amin'ny fampahalalana sy ny fahefana.
Ny tsy fahalalana iaraha-miasa amin'ny hery no fahavalo lehibe indrindra amin'ny demokrasia. Ny filoha Donald J. Trump dia nanary ny fanaovan-gazety mahery vaika ho "vaovao sandoka", ary ny fanatrehana kely ny fanokafana ny filoham-pirenena dia heverina ho toy ny "zava-misy hafa." Ny orinasam-pitaterana an'habakabaka, manandrana mandresy lahatra ny besinimaro fa ny sidina soa aman-tsara dia nanakarama University Harvard mba hamolavola tetikasa fikarohana, manaporofo fa ny sidina dia mety hitera-doza kely amin'ny fahazoana SARS-CoV-2 (COVID-19) noho ny rafitra sivana amin'ny rivotra sy takiana sarontava. Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ambany ny risika na inona na inona toerana misy ny seza (izany hoe eo afovoany, eo anelanelanana na eo amin'ny varavarankely).
Ny tsy ampahany amin'ny ezaky ny fifandraisana amin'ny besinimaro dia ny hoe nifototra tamin'ny maodely ny fikarohana ary noho izany ny tolo-kevitra dia miorina amin'ny angon-drakitra novolavolaina araka ny fepetra voafehy ary ny mpandeha dia tsy maintsy tsy misy soritr'aretina COVID-19, mifanaraka amin'ny kaontim-piaramanidina rehetra misy ny ara-batana manalavitra mandritra ny fiakarana sy ny famoahana (mari-pahaizana fiarovana - ho tapa-kevitra). Ankoatr'izay, ny vavahady sy ny ekipa misidina dia tsy maintsy manery ny fanarahan-dalàna. Ny ezaka ho an'ny fifandraisana amin'ny daholobe dia nampiroborobo ny lohateny izay ambany noho ny marimaritra iraisana, anisan'izany ny: "Fianarana Harvard: Fampitana ambany ny Covid-19 amin'ny mpandeha misaron-doha" (businesstravelnews.com), ary "Miaraka amin'ny fepetra mety, ny filokana dia azo antoka kokoa noho ny sakafo any amin'ny trano fisakafoanana Mandritra ny Areti-mandringana, hoy ny Study (washingtonpost.com).
Na dia manantitrantitra ny fanadihadian'izy ireo ny valiny ho tsy miangatra aza ireo mpikaroka, ary manamafy ny fehin-kevitra navoakan'ny Departemantan'ny Fiarovana (ny mety ho fiparitahan'ny virus dia noroahin'ilay mpandeha voan'ny aretina - 3 amin'ny 1000) - RAHA samy misaron-tava daholo ny olona, ​​inona no tsy ambara avy hatrany , dia ny zava-misy fa ny fianarana Harvard dia novatsian'ny indostrian'ny seranam-piaramanidina.
Ho fanampin'izany, zava-misy iray hafa izay tsy tao anatin'ny fanadihadiana na ny fampielezan-kevitra momba ny fifandraisana amin'ny daholobe izay niaraka tamin'ny famoahana ny tatitra dia ny tatitra momba ny areti-mifindra eoropeanina Eurosurveillance Journal izay nanondro ny aretin'ny mpandeha 13 tamin'ny sidina ara-barotra niaraka tamin'ny mpandeha 48 sy ekipa 12 anaty fiaramanidina misy seza 283 miaraka amin'ireo mpandeha sivy mitondra sarontava, ary iray (zaza iray taona). Ireo mpandeha dia avy amin'ny kaontinanta telo samy hafa izay nifandray tamin'ny seranam-piaramanidina lehibe iraisampirenena ho an'ny sidina mankany Irlandy. Ny tatitra dia nampifandray ny fielezan'ny COVID-19 ka hatramin'ny 46 ny olona fanampiny any Irlandy (avy amin'ireo mpandeha 13 voalohany).
Ny vahoaka dia noana amin'ny fikarohana mifototra amin'ny siansa tsy mitanila; na izany aza, misy ny tena zava-misy ifotoran'ny indostria sy ny governemanta afaka miray tsikombakomba amin'ny famoahana vaovao tsy misy tanjona. Fantatry ny mpanjifa fa ny tombotsoany matanjaka dia mampiditra "fahalalana sy teknolojia" natao hanompoana ny orinasa fa tsy ny tombontsoam-bahoaka.
Manamora ny fanaparitahana ny indostria
Ny mpandeha dia manafatra aretina rehefa mivezivezy eran'i Eropa, Azia, Afrika ary izao tontolo izao. Ny hetsiky ny olona sy ny fivelaran'ny varotra sy ny serivisy dia mihantsy ny fanaraha-maso ny areti-mifindra. Ny dia dia nitombo tamin'ny alàlan'ny fanatontoloana ireo orinasam-pitaterana an'habakabaka sy fitsangantsanganana an-tsambo. Miaraka amin'ity fitomboana ity dia ahiana hisy ny aretina vaovao satria iharan'ny otrikaretina vaovao ny olona amin'ny alàlan'ny fitaterana iraisam-pirenena. Raha ny sasany nanandrana namorona fomba vaovao hamahana ny fihanaky ny areti-mifindra (ie, SARS-2003; EVD outbreak-West Africa - 2014; COVID-19, 2019-2020) dia miharihary fa ny rafitra manerantany dia tsy mandeha. Mandrahona ny fahasalamam-bahoaka sy ny toekarena manerantany ny Pandemika, tohanan'ny fihomboan'ny hotely, ny indostrian'ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany ary ny fitarihan'ny indostria dia toa tsy afaka sy / na tsy te hiatrika ny andraikiny amin'ny fanamorana ny olana sy fitadiavana vahaolana.
Miadana loatra ny mamaly
Raha namaly haingana ny COVID-19 (tao anatin'ny 2-herinandro) ny mpahay siansa, governemanta, OMS ary ny mpitarika orinasa, dia nanondro ny fikarohana fa ny famerana ny dia dia 99 isan-jato ary miaraka amin'ny fanakatonana ny sisin-tany, hisorohana ny fivezivezena amin'ireo mpandeha voan'ny virus. Ny fetra 90 isan-jato amin'ny sidina lavitra dia mety hampihemotra ny fihanaky ny valanaretina. Ny tahotra fahasahiranana ara-toekarena dia tsy tokony ho antony hitazomana ny sisin-tany rehefa voamarina ny areti-mifindra. Fomba iray na hafa, hisy ny fahasahiranana ara-toekarena. Ny tahotra ny sazy ara-toekarena sy ny fanilikilihana ara-tsosialy dia azo fantarina ary hitarika ny manampahefana tsy hanao tatitra momba ny antontan'isa momba ny valanaretina, ary ahiana ny vokadratsin'ny fahasalamam-bahoaka mitarika antsika amin'ny toe-javatra mahatsiravina izay iainantsika ankehitriny.
Fiomanana - Tsy fisorohana
Rehefa miroso amin'ny 2021 izao tontolo izao, ny foto-kevitra momba ny fiomanana mifanohitra amin'ny fisorohana dia tokony ho tanjon'ny drafitra ho an'ny krizy ara-pahasalamana manaraka. Ny mifanohitra amin'ny valanaretina dia tsy ny tsy fahampian'ny aretina fa ny aretina endemika - ny fizarana aretina heverina ho mahazatra sy an-trano ary eken'ny rehetra. Ny fitomboan'ny dia an-tany, ny fizahan-tany ary ny varotra dia hitondra fanamby vaovao amin'ny lafiny rehetra amin'ny tontolo iray mitambatra manerantany.
Ny asan'ny olombelona no tompon'andraikitra amin'ny famoahana sy ny fihanaky ny areti-mifindra. Azo atao ny miatrika ny aretina ary mandray ny fepetra azo atao mba hampihenana ny mety ho fiparitahana sy hiparitaka amin'ny fanovana ny fitondran-tenan'ny olombelona ary ny fampiharana ny rafitra fampitandremana mialoha tsara kokoa sy ny fifehezana ny aretina ary ny fisorohana ny aretina, ao anatin'izany ny fanaraha-maso manerantany, ny finiavana politika iraisam-pirenena, ny fiaraha-miasa marobe amin'ireo mpandray anjara rehetra - fiaraha-miasa hamantatra, hamefy ary hanafoana ny fandrahonana amin'ny ho avy.
Ireo firenena izay tsy manana fotodrafitrasa sy fitaovana tsy ampy ary tsy manana fahatsiarovan-tena momba ny biosafety any amin'ny laboratoara sy ny biosecurity izay tompon'andraikitra tamin'ny fiparitahan'ny aretina tamin'izao tontolo izao, dia tokony ho tompon'andraikitra. Ny olona mikarakara ny valanaretina, indrindra ny viriosy, dia tsy maintsy ampiofanina mba tsy hanala sarona ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fandotoana be risika. Manomboka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny laboratoara, ka hatramin'ny dokotera sy ny mpitsabo mpanampy ary ny mpiasa mpanampy, ny fampiofanana sy ny fanabeazana dia tsy maintsy zaraina fa tsy hitsitsy na hoferana ho an'ny vitsivitsy. Ny ambaratonga maro sy ny lafiny fampiantranoana, fizahan-tany ary fizahan-tany fizahan-tany dia tsy maintsy tafiditra ao anaty resaka satria eo amin'ny laharana voalohany izy ireo, mihaona sy miarahaba ireo mpandeha rehefa tonga any amin'ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo sy seranam-piaran-dalamby ary mifandray akaiky amin'izy ireo amin'ny 24 / 7/365 fototra.
Misy ny ho avy eo amin'ny sehatry ny fizahantany, saingy - raha te hiroborobo izy io dia tsy maintsy ao anatin'ny vahaolana, satria efa ampahany lehibe amin'ny olana izany.